Chelsea oo qarka u saaran in ay heshiis lagasho badelka Eden Hazard Waa Kuma? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
(08-12-2018) Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa isku diyaarinaysa xaalad kasta oo kasoo korodha xiddigeeda Eden Hazard oo aan qalinka u qaadanin heshiis cusub oo uu muddada ugu kordhiyo Blues.
Hazard ayaa la sheegay inuu haddaba wada hadallo la bilaabay Real Madrid, taas oo ku qasbaysa Blues inay ka tabaabushaysato oo ay raadsato beddelka ugu habboon.
Wargeyska kasoo baxa dalka Faransiiska ee Le Progres ayaa sheegay in Chelsea ay u dhow dahay inay heshiis la gasho xiddiga khadka dhexe ee kooxda Lyon iyo xulka qaranka France ee Nabil Feikir, isla markaana ay meel wanaagsan wax u marayaan mulkiilaha Lyon Jean-Michel Aulas oo ugu dambayn aan ka warwareegi doonin inuu lacag ku badasho xiddigiisan.
Warku wuxuu sheegay in 25 jirkan oo Liverpool ay geed dheer iyo mid gaabanba u fuushay xagaagii uu ugu dambayn iman doono Premier League bisha January amaba xagaaga laakiin uu kasoo degi doono garoonka Stamford Bridge.
Wargeyska Daily Mail ee kasoo baxa UK ayaa isaguna qoray in Liverpool ay dhimasho ka xigto arrintan, sababtoo ah, tababare Jurgen Klopp ayaa taageere weyn u ah Fekir, waxaana uu hawlgeli doonaa bisha January marka uu suuqu furmo si uu Chelsea uga soo horqaato.